Ogaden News Agency (ONA) – Waxaa la Wadaagi Karaa Dheefta Xoriyadda, Dhibka xoriyadda loomarose lama Wadaagi karo
Waxaa la Wadaagi Karaa Dheefta Xoriyadda, Dhibka xoriyadda loomarose lama Wadaagi karo
Posted by ONA Admin	/ March 6, 2013
Ku: Kooxda Karamardha (The Karamardha Group).
Waxaa hubaal ah qof caqli leh inuusan diidi karin odhaahda aan cinwaanka uga dhignay maqaalka, sababtoo ah taariikhdana way sugtay, dabeecadda aadanahana waxaa ka mid ah in dheefta la wada doonto dhibkana laga kala cararo. Mana jiro dhib soo mara umad gumaysi ku jirta oo ka daran dhibaatada gumaystaha markay u dareeraan halganka gobanimadooda. Maadaama uuna gumaysiga ugu imanin rabitaankooda, lagama yaabo mana dhicin inuu dhibaato la’aan kaga tago –Iga Guur kuma guuro-.
Waxaan horey idiinku soo bandhignay maqaalkii ay ka qoreen Kooxda Karamardha (Karamardha Group) wadahadlkii fashilmay. (Halkan Ka akhri) Waxaan qoraalkaa ku xusnay in aan si gaar ah uga faaloon doono Q2aad ee talooyinkii ay KK u soo jeediyeen JWXO.
Somaalida waxay ku maahmaahaan – Gaalka Dil Gartiisana Sii – taasoy ula jeedeen qofkaad col tihiin xataa gar eexo haka galin. Somalidii hore sidaa umbay ahayd. Beenta iyo gar-eexashada qofkii lagu barto wuxuu ahaan jiray mid aan dib dambe loo aaminin. Ilaahayna isagoo la hadlaya muslimiinta wuxuu ku waaniyay inay iska ilaaliyeen eexda xataa qofka naftiisana ha ahaatee;
.. ياءيها اللذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوا على أنفسكم أوالوا دين والأقربين
Hordhacaa yarka waxaan u hormarsaday in marka laga hadlayo arimaha ku saabasan halganka ka socda Ogadenya iyo Jabhadda ONLF si cadaalad ah loo eego oo aan gar eexo laga galin. Sabab kasta iyo ujeeda kastoo ka dambaysaba.
Waxaa waliba laba xariijin hoosta laga marin; Qofkii horey u aaminsanaa shacabka Somaliyeed ee ku dhaqan Ogadenya (ama Somali Galbeed) inuu gumaysi ku jiro, oo taageersanaa halganadii ka horeeyay ONLF, inay adagtahay inuu helo cudurdaar kale oo uu kaga horyimaado ONLF aan ahayn looma dhanna ururka/halganka. Waa markaan si niyadsami ah ku eegno.
Hadaan hoos ugu soo dhaadhaco dulucda dhambaalkan, maqaalkii aan horey u sii akhrinay ee Kooxda Kaaramardha (The Karamarda Group) ay inoo soo bandhigeen, waxaa ku xusnaa talooyin aad u qiimi badan oy u soo jediyeen ONLF. Waxaa ka mid ahaa talooyinkaa;
2- ONLF should use this opportunity to broaden its support base. The Front should consult with the non-Ogaden and Ogaden intellectuals during the process. (Reason) .. to show that ONLF is not a tribal entity but a political organization that is interested in the wellbeing of all the people of the SRS.
Talada Kooxda Karamardha ee ku xusan qodobkan 2aad wuxuu u dhigan yahay; inay ONLF uga faa’idaysato arintan siday u balaadhin lahayd taageerayaasha ururka (to broaden its support.). Waa inuu Ururka kala tashado hawlahan socda aqoonyahanka aan Ogadeenka ahayn iyo kuwa Ogadeenka ahba. Say u muuijyaan inuu ururka ONLF yahay Urur siyaasi ah oo aanu ahayn urur Qabiil.
Waa talo wanaagsan, oo Ururka ay tahay inuu qaato. Hasa ahaatee waxaa mudan in aan weydiino Kooxda Karamardha (The Karamardha Group), miyaanay jirin astaamo kale oo u muujin kara in ururka ONLF oo 22tan sano waday halgan hubaysan uusan ahayn urur qabiil?
Waxaa laga yaabaa, in la yidhaahdo madaxda ururka waa Qabiilkaa, ciidanka dagaalamaya ee naftooda hurayna sidoo kale waa Qabiilkaa. Waana midda abuurtay dareenka ah inuu ururku yahay mid aan loo dhanayn. Hadaan kaba soo qaadno inay jirto arintaasi (inkastoo xubnaha xog-ogaalka hoose u ah ururka aanay arintaa ogolaanin), yaa eedeeda leh? Ma waxaa lagu eedeeyn xubnaha ururka (Hoos ilaa kor) ee naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda u huray halganka gobanimadoon, ama waxaa lagu eedeyni qofka banaanka ka taagan ee leh qabiil ayaa isku urursaday oo la dagaalamaya Itobiya? Waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay ugu muuqato su’aashan mid u dhiganta -Ukunta iyo Digaagadda midkeebaa horeeyay!! Hasa ahaatee qofkii meel iska dhiga caadifada oo ku baadha caqli ka madaxbanaan fikrad horyaal ah oo la kaashada taariikhda iyo waaqica ay umadda Somaliyeed mareyso, waxaa hubaal ah inuu cadaaladda u dhawaanayo.
Laba siyaabood ayay ururada Gobanimadoon uga dhex halgamaan bulshadooda.
1- In qofka ku soo biiraya uu ugu yimaado rabitaankiisa, markuu ku qanco in hadafka uu ururkaasi u dagaalamayo ee ah Xoriyadda ay qaalisan tahay naftiisa.
2- Inuu ururkaasi shacabka qasab kaga dhigo inay hubka qaataan oy la dagaalamaan gumaysiga.
Labadaa siyaaboodba waa lagu soo halgamay, guul iyo guuldarro wax lagala kulmayba. Ururka ONLF wuxuu raacay midka hore oo ah inuu qofka ugu soo biiro ugana tago rabitaankiisa. Dabeecadda qofka Somaliga ah ayaana sidaa u qaabaysan.
Hadday arintu sidaa tahay, oo ONLF aanay qofna halganka socda ku soo qasbin kuna qasbi karin, qofkii ku soo biiraya ee diyaarka u ah inuu naf iyo maalba umaddiisa kaga dul qaado heeryada gumaysiga, ma in la hubsadaa qabiilka uu yahay si aan loo odhan reer hebel ayaa u badan ururka? Qofkase aan rabin inuu ku soo biiro halganka, isagoo u aanaynaya reer, maxay tahay fikradda ka maqan ONLF oo aanay tijaabinin say ugu qanciso qofkaasi inuu ku soo biiro halganka socda oo naftiisa iyo maalkiisaba uu ugu huro xoreynta umadda Somaliyeed ee ku hoos jirta gumaysiga?
Walaaladeen (Karamardha Group) ayay tahay inay si cilmi ah u baadhaan su’aashaa oy jawaab waafi ah naga siiyaan.
Waxaan intaa uga gudbayaa, ma jirtaa hab lagu kala sooci karo habdhaqanka urur kasta si loo ogaado inuu yahay urur Qabiil iyo inuu yahay mid Qaran, iyadoon loo aabayeelin xubnaha uu ka kooban yahay ururkaasi?
Qofka Somaliga ah ee qarnigan nool garaadkiisuna uu taam ahaa bilowgii ilaa dhamaadkii dagaaladii sokeeye ee lagu burburiyay Dawladnimadii Somaliya, waxaa hubaal inuu si dhibyar uga jawaabi karo su’aashaa.
1- Waxaa la ogaaday ururka ku habaysan dana qabiil magacii la doono haloogu yeedho oo halaga hormariyo Somali (SSDF, SNM, USC, SPM, etc), inuusan u aabayeelin danta guud ee umadda.
2- Waxaa kaloo la ogaaday urur dan qabiil loo asaasay inuusan sii jiraynin sababtoo ah qabiilku maleh dhamaad, maslaxadiina waa joogto.
3- Waxaa kaloo la ogaaday urur loo asaasay dan qabiil in quwadaha shisheeye ee damaca ka leh umadaasi ay si dhibyar u maareyn karaan.
3exdaa qodob oo umadda Somaliyeed ay xaqiiqsadeen maanta maka muuqdaa ururka ONLF? Hadaan anigoo reer hebel ah dantii umadda aan ka hormariyo dantii reerka, maxaan ka mudnahay umadda?
Ururka ONLF waxaa ka soo horjeeda qaar reerka loo aanaynayo ku abtirsada. Barnaamijka 1aad ee lagu dagaalgaliyay dadkaana waa inay ONLF ka soo horjeedo dantii qabiilka. Ma odhan karnaa aqoonyahanka ku bahoobay Kooxda Kaaramardha arintaa ma ogsoona? Miyaanay la soconin KK, ereyada Cabdi iley uu gumaysiga u soo dhiibay ee la faray inuu qabiilka ku abaabulo oo ah ONLF waa – Ururka Baabi’inta Ogadeenka – ee la dagaalama, ama waa arin ay si ula kac ah uga indha-dadbeen maadaama aanay garta ugu toosaynin?
Ugu dambayntii, hadafka ururka iyo hab-dhaqankiisa waa in lagu qiimeeyaa.